ရေစိုခံ Ultrasonic Natural ခြင်တွန်းလှန်လက်ကောက် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မရှိ | WoopShop®
ရေစိုခံ Ultrasonic သဘာဝခြင်တွန်းလှန်လက်ကောက်
မှစ. သင်္ဘောများ ပြင်သစ် တရုတ်နိုင်ငံ စပိန် ရုရှားပြည်ထောင်စု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
ပြင်သစ် / အဖြူ တရုတ် / Black က စပိန် / လူမည်း ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / Black က ပြင်သစ် / လူမည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / လူမည်း ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အဖြူရောင် တရုတ် / အဖြူ ယူနိုက်တက်စတိတ် / အဖြူရောင် စပိန် / အဖြူ
ရေစိုခံ Ultrasonic သဘာဝခြင်တွန်းလှန်သောလက်ကောက် - ပြင်သစ် / အဖြူရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
rated ဗို့အား: အဘယ်သူမျှမ
အချိန်အားသွင်း: အကြောင်းကို 30 မိနစ်
အရောင်: Bမရှိခြင်း, အဖြူရောင်
အသိဉာဏ် ultrasonic ခြင်တွန်းလှန်လက်ကောက်
ခြင်ခြင်၏ ၇၀% မှ ၈၀% ထိထိထိရောက်ရောက်မောင်းနှင်နိုင်သည်
အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောဓာတုပစ္စည်းများမပါ ၀ င်ပါ။
အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ - ခြင်ဆေးခွေသန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတုဆေးများကင်းစင်ခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကလေးသူငယ်များ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုဝတ်ဆင်နိုင်သည်၊ သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်ဘက်တွင် (ပင်လယ်ကမ်းခြေ၊ ပန်းခြံ၊ စခန်းချ၊
1 * လက်ကောက်
Cable အားသွင်းခြင်း * 1
1 * ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲစာအုပ်
မှတ်စု: မတူညီသောမော်နီတာများအကြားခြားနားချက်များကြောင့်ရုပ်ပုံများသည်ပစ္စည်း၏အမှန်တကယ်အရောင်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်မည်မဟုတ်ပါ။ အသေးစိတ်အရွယ်အစားများကိုသင်၏အရွယ်အစားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ 1-3cm အမှားအားလက်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်းကြောင့်ပြုလုပ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းများကိုရယူပါ၊ အလုပ်လုပ်ပုံရသည့် LED သည်မျက်တောင်ခတ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ငါးဖမ်းခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်ကိုထပ်မံစစ်ဆေးပါမည်။ ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုအကြံပြုပါသည်
Superfast ပို့ဆောင်ပေးမှု, Khabarovsk သို့3ပတ်! ငါပစ္စည်းကိရိယာများပျော့ပျောင်းသောအဆင်ပြေသိုင်းကြိုး, ကြိုက်တယ်။ အကြောင်းပြချက်အချို့အတွက်စက်နှစ်ခုလုံးကိုသင်ကုတ်ခြစ်ရာအနည်းငယ်သာပြုလုပ်သည်။ ငါတို့နောက်မှစမ်းသပ်လိမ့်မယ်
me llego mojado no no si funcionara bien ...